ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကလူတွေကိုရူးသွပ်စေသလား။ Naomi Wolf က - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ညစ်ညမ်းအရူးယောက်ျားကားမောင်းသလဲ? နောမိ Wolf ကအားဖြင့်
အယ်ဒီတာ၏မှတ်ချက် - နောမိ Wolf သည်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလူမှုရေးဝေဖန်သူဖြစ်သည်။ သူသည်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သောစာအုပ်သည်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးသမားများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်သည်။ Wolf ၏အသေးစိတ်အတွက် Project Syndicate ကိုကြည့်ရှု။ Facebook နှင့် Twitter တွင်ကြည့်ပါ။
နောမိ Wolf ကအားဖြင့်
ဒါဟာမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်း (အမှန်ပင်, လ) လိင်က Self-ဖျက်ဆီးနည်းလမ်းပြုမူကြမည်မျှမြင့်မားမြင်နိုင်ယောက်ျားလျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်းသည်။ တချို့ကအစွမ်းထက်ယောက်ျားရှည်လျားလိင်အတွက်သက်တောင်ကြပြီ ယနေ့မတူဘဲသော်လည်း, သူတို့သည် ပို. သတိပညာရှိတို့ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏အပုဒ်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ရန်အတွက်အများကြီးပိုကောင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂလိကအပြုအမူဖော်ထုတ်ပေးရန်ကြီးထွားနည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုဒီပြောင်းလဲမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အတိအကျအမှတ်ဖြစ်ပါသည်: နှောင်းပိုင်းတွင်၏လိင်-tinged အရှုပ်တော်ပုံများအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားလူဤမျှလောက်များစွာသောသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ကြပါပြီ - တခါတရံစာသား - ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, Twitter နဲ့အခြားသတိလက်လွတ်မီဒီယာများ၏မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒရှိခှငျတစျဆငျ့။
အဘယ်အရာကိုဒီ weirdly disinhibited ဆုံးဖြတ်ချက်ချကားမောင်းသလဲ? မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုနှင့်သုံးစွဲမှုအမှန်တကယ်, ယောက်ျားဦးနှောက် rewiring လိင်အကြောင်းကိုယောက်ျားရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ထိခိုက်သူတို့ကိုပိုပြီးအခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့ခံရနိုင်မလား?
ဒီစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတိုးပွားလာခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။ ခြောက်နှစ်အကြာ, ငါသည်ကုသနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်မှူးမတ်သို့ရာတွင်အတူတူပင်လူဦးရေအကြားတစ်ဦးခွန်အားမရှိခြင်းအတွက်တိုးခြင်းနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်မြင့်တက်ဆက်သွယ်ခဲ့ထောက်ပြထားတဲ့ "အဆိုပါ Porn Myth ဟာ" ဟုခေါ်ကာအက်ဆေးရေးသားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကနှောင့်အယှက်မယ်လို့အဘယ်သူမျှမအော်ဂဲနစ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒသူကျန်းကျန်းမာမာလုလင်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ပညာရှင်တွေရဲ့တို့တွင်အယူအဆညစ်ညမ်းတဖြည်းဖြည်းလိင်ဒီလူ desensitizing ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်ဘာသာရပ်များအတွက်လျင်မြန်စွာ desensitization ရရှိအတွင်းအမာခံညစ်ညမ်းရဲ့ထိရောက်မှုကအရမ်းထိတ်လန်သို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံအခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လေ့ကျင့်ရေးဆရာဝန်များနှင့်စစ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်၎င်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
အများဆုံးအထီးဘာသာရပ်များအပေါ် desensitization အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးထား, သုတေသီများသူတို့လျင်မြန်စွာ arousal ၏တူညီသောအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ဆွ၏အဆင့်မြင့်မလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအချိန်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းအဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများက porn အသုံးပြုမှုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိတ်ဖက်များ၏ခေါ်ဆောင်သွားအယူခံဝင်ဖို့ကျန်းမာလုလင်တို့သည် desensitizing ခဲ့သည်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်မှစ. ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် system ပေါ်တွင်အချက်အလက်များ၏အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ပိုပြီးအခိုင်အမာဒီ rewiring ရှင်းပြဖို့စုဆောင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အခု porn တစ်နာရီသို့မဟုတ်နောက်မှနှစ်ခုအဘို့, ယောက်ျားရဲ့စိတ်အခြေအနေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီသူတို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောခံစားရစေသည်ရာ, တစ်ရေတိုရေရှည် dopamine တိုးတက်မှု၏ပုံစံအတွက်အထီးဦးနှောက်မှဆုလာဘ်ကယ်တင်တတ်၏ငါသိ၏။ အဆိုပါအာရုံကြော circuitry ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်ကင်းကဲ့သို့သောအခြားစွဲလမ်းအစပျိုးခြင်း, အဘို့အကြောင်းမှတူညီသည်။
အဆိုပါစွဲလမ်းအလားအလာလည်းတူညီသည်: လောင်းကစားသမားတွေနှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲသူအတူတူ dopamine တိုးတက်မှုရရှိရန် ပို. ပို. အလောင်းအစားသို့မဟုတ်ချေဆတ်သောအခါမှလိုအပ်နေဒါကြောင့်ယောက်ျားစှဲဖြစ်လာညစ်ညမ်းစားသုံးနိုင်ပါသည်, compulsive ဖွစျလာနိုငျသကဲ့သို့။ အဆိုပါ dopamine ပေါကျကှဲချွတ်ကျီပြီးနောက်, ဤသည်အခြားဆုလာဘ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းနှင့်အတူအမျှ, စားသုံးသူတစ်ဦးတာကတော့စိတ်ဓာတ်ခံစားရ - စိတ်တိုစိုးရိမ်, နက်ဖြန်ပြင်ဆင်ချက်အဘို့အတောင့်။ (desensitization အဖြစ်ကောင်းစွာညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးစားသုံးသူထိခိုက်စေခြင်းငှါကနေဒါ Concordia တက္ကသိုလ်မှဂျင်မ် Pfaus ခြင်းဖြင့်အဝတ်မခြုံဘဲအချို့သစ်ကိုသက်သေအထောက်အထားများ, ရှိပါသည်။ )
ဖတ်ပါ - ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိကျား၊ မရေးရာမူကြိုကျောင်းတွင် 'ယောက်ျားလေးများ' သို့မဟုတ် 'မိန်းကလေးများ' မရှိပါ။
သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနောက်ဆုံးမှာအဖြစ်ကောင်းသောခံစားရနိုင်ရန်အတွက်နည်းလမ်းများ၏အခြားမျိုးအခြားမညီကြောင်းဖဲ့သောပုံများ, လိုအပ်မှစားသုံးသူဦးဆောင်သူတို့၏အာဏာကိုဆုံးရှုံး: ဒီ dopamine အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပို. ပို. လွန်ကဲဖြစ်လာလေ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းပြသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောယောက်ျား (နှင့်အမျိုးသမီး) တစ်ဦး "dopamine အပေါက်" ရှိသည် - သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် '' ဆုလာဘ်စနစ်များကိုလျော့နည်းအကျိုးရှိစွာများမှာ - ပိုမိုလွယ်ကူစွာစွဲဖို့ပိုပြီးအစွန်းရောက် porn ဖြစ်လာမှသူတို့ကိုပိုမိုအောင်။
ပင်အလွန် Self-အဖျက်အမှုအရာ - - dopamine ၏နောက်တစ်နေ့ hit ရဖို့သူ့ကို enable မဆိုစွဲနှင့်အတူကြောင့်အမှုအရာလုပ်နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စှဲလမျးသူများအတွက် neurochemical အကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အတိတ်တွင်တံခါးပိတ်ရေးရာလုပ်ဆောင်သွားရန်အချိန်နှောင့်နှေးခြေလှမ်းတွေယူနိုင်တဲ့သူကိုယောက်ျားယခု Self-incriminating စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်ရန်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ဘူးအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်နိုင်မည်နည်း သို့ဆိုလျှင်ဤကဲ့သို့သောယောက်ျားနတ်ဆိုးများသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားဝှကျစာ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်အတွက်လုံးဝမရှိတော့နေသောစွဲမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒါကသူတို့ရဲ့အပြုအမူများအတွက်တာဝန်မဖြစ်ကြောင်းပြောမဟုတ်ပါဘူး။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အားကောင်းစွဲလမ်းအလားအလာနားလည်ရန်, နှင့်စွဲတဦးတည်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်, မိသားစုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ, ဒါမှမဟုတ်တရားသဖြင့်စီရင်ထိခိုက်စေမှစတင်သည်လျှင်အကြံပေးခြင်းများနှင့်ဆေးဝါးရှာတာဝန်: ဒါပေမဲ့ငါကတာဝန်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။
ယခုအသုံးပြုပုံ porn-စွဲယောက်ျားနို့နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုမျှတတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်, သူတို့ရဲ့ compulsive ၏ကရုဏာတော်မှာလျော့နည်းတဦးတည်းကသူတို့ကိုပြန်လည်များအတွက်ထိရောက်သောနှင့်အသေးစိတ်မော်ဒယ်လည်းမရှိ။ ထက်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံမုန်းတဲ့သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်စုပေါင်းတရားစီရင်ပိုင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ - - တစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ ပို. ပို. စွဲအမာခံဖြစ်လာပြီကြောင်းညစ်ညမ်းဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အထီး virility အပေါ်ဖျက်ဆီး wreaks ပိုကောင်း-အသိပေးရွေးချယ်မှုလုပ်လူတွေကိုခွင့်ပြုဘယ်လိုနားလည်ခြင်း။
ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြအမြင်များတစ်ခုတည်းကိုသာနောမိ Wolf ကသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ မူပိုင်: Project မှ Syndicate, 2011 ။ သငျသညျစီမံကိန်း Syndicate မှာနောမိ Wolf ကအားဖြင့်ပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ